U-Anja Schaap unokubona imifanekiso kwi 'Uphando luceliwe' kwaye ngoko akukho PsyOp? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Juni 2019	• 7 Comments
Ukuba imifanekiso yophando eceliwe ngobusuku bobusuku ibonakala, unokukhawuleza ufikelele kwisigqibo sokuba asikwazi kwakhona ukujongana nesinye i-PsyOp engekho (ukusebenza kwengqondo). Ngaphakathi yam nqaku malunga nokulahleka kukaAnja Schaap ndibonise indlela RTL Nieuws zazisa uSherlock Holmes 'kunye kunye neprogram ehlobene nelahleko kunye nendlela u-Anja Schaap wayenayo into enhle ngayo ngoSherlock Holmes kwiphepha lakhe le-Facebook. Kwaye idilesi yasekhaya ayichaza kwiphepha lakhe le-Facebook ngulooSherlock Holmes (I-221B Baker Street).
Abaninzi babhekisele kwicandelo le-PsyOp ukuba bashenxise le projekthi yokuphenya phakathi kwabantu. Ndacacisa nokuba kutheni abantu befuna sifune kunye. Into enokuyenza nento yokuba akukho ziintlola ezingcono kunabantu abaqala ukujonga abanye abantu njengomdlalo omnandi we-Pokémon. Ngaphezu koko, amapolisa angakwazi ukuwaphula ngokusemthethweni zonke iifowuni ixesha elipheleleyo emva kokuba amkele amalungelo okusebenzisa ikhamera, imakrofoni, idatha yendawo, njl.
Kwimifanekiso engezansi ye-Opsporing Verzocht sibona u-Anja Schaap ehamba ngokucacileyo ehamba kwi-cafe, ehleli e-bar kwaye ehamba ngeKatwijk. "UNgoko ukhona ngokwenene kwaye uye wagqogqa ngeKatwijk kwaye ngoko ilahleko liyinyani", Mhlawumbi mhlawumbi isigqibo sakho siya kuba. Emva koko ndikukhumbuza kwakhona ukuba i-Algemeen Nederlands Persbureau isezandleni zomvelisi weTV: uJohn de Mol. Oku kuthetha ukuba iindaba zinokuhlanganiswa ngokuveliswa kweTV (ii-Hollywood zobuchwepheshe). Ngesofthiwe yanamhlanje, unokukwazi ukudala lula ubuso obungabikho. Unako ukukopisha umntu opheleleyo kwaye uvumele umdlali we-stand in in actor okanye umdlali we-actress ahambe endleleni kwaye abeke umzimba kunye nobuso bomdlali owenziwe phezu kwayo. (Funda ngaphezulu ngevidiyo, ukuba ividiyo isusiwe, nqakraza apha)
Nabani olandele iimeko ze-Anne Faber kwaye usandul 'ukubona ukuba icala likaJulie van Espen eBelgium kwiindaba ezilungileyo kufuneka liqaphele ukuba kukho ukufana okufanayo kwezi zimbini. Ukuba silandela imidiya, ezi ndaba ziphela inyaniso. Sifakwe imifanekiso eqinisekisa ubungqina kwaye asibonanga kuphela intsapho kunye nabahlobo, kodwa sibona nezithombe kunye nevidiyo zangempela zabalinganiswa, oko kuthetha ukuba akunakwenzeka ngaphandle kwe nyaniso. Kule ngxaki ye-Anja Schaap yinto enemifanekiso eqinisekisa ukuba u-Anja Schaap ukhona kwaye akukwazi ukuba yi-PsyOp.
Kwinqaku elingezantsi, ndizama ukucacisa ukuba kutheni usenokufuneka ukhange ikhanda lakho. Okokuqala ngethuba elifutshane.
Sivele ngento ye-'trll factory 'okanye' troll army ', kodwa iRashiya kuphela (iindaba ezitshicilelweyo zisitshela). Nangona kunjalo, lwam amava kukuba loo mabutho aseTroll ngokuyininzi aseNetherlands. Awusayi kubona loo nto kwiimpendulo zam, kuba ndizihluza ngokusebenzisa i-filter-self-set filter. Masithi xa oorhulumente basebenzisana ne-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) kwaye bathengise le mpu melelo "ngaphaya komda" (ngenxa yokuba bafumene kakuhle ilizwe labo), udinga umkhosi omkhulu we-troll ukufumana iimpendulo kuzo zonke iifom kunye neengxoxo ze-intanethi kwiintlalo media "ukubeka iliso". Baya kuqondisa ingxoxo ngokusebenzisa izimvo ezifana "Ndiyamazi". "UNdathetha nomntu omaziyo"Okanye" wayenomhlobo wam eofisi "kunye nezinye iimbono.
Ngaba uyazi ukuba uJohn de Mol uqobo lwe-ANP? Uyazi ukuba uJohn de Mol waba nobutyebi? Ngokukhulu ngokuthengiswa kwemiboniso yeTV ephumelelayo. Uyazi kuzo ezibonisa njenge-Holland's Got Talent. Emva koko bavavanywa kulezo zimbalwa zabantu baseDatshi kwaye xa bebamba, bathengiswa ngaphesheya komda njengengcamango kwaye bafumene kakuhle. Ngexesha le-Zaanse vloggersrel, ndakwazi ukujonga (kubonga kwimifanekiso enikezelwe ngumhlobo owayehlala kwindawo yokuhlala) indlela yokubanjwa kwakunzima emsebenzini oqondisa i-vloggersrel epheleleyo. Kwacaca ukuba kwakukho ulawulo. Kwakhona kwacaca ukuba, umzekelo, ukuboshwa kuthathe ixesha elide, kuba i-cameraman kwafuneka ihambe kwindawo efanelekileyo. Kungekudala ngaphambi kokuba, abazalwana ababephikisana phambi kwekhamera babedlala ngokukrakra baze bathabathelene. Ukuthi i-Zaanse vloggersrel yayisisigxina ngokupheleleyo kwaye ilawulwa kuyo. Lezo mifanekiso unakho apha sibone kwakhona.
Makhe ndiqale ngokuchazela kwakhona indlela amajelo angayidlala ngayo le mdlalo ye-PsyOp kunye noko Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo lawulo olubonakala lusetyenziswa rhoqo kunye.
Ngoko ke unokusebenza kunye nezicwangciso ezichazwe ngasentla ukudala loo ngxaki. Enyanisweni, kuthetha ukuba awukwazi ukuvavanya nayiphi na intetho, intetho okanye nayiphina imifanekiso enyanisweni. Kwakungekho nemifanekiso yeekhamera zokhuseleko, njengoko ubona kwiTV. Okanye awukholelwa ukuba Ukufunwa Kufunwa kungasetyenziselwa iinjongo ze psyop? "Ngulo mboniso onobuhle."
Ngoko awukwazi ukukholelwa akho amehlo. Ithelevishini kunye neminye imithombo yeendaba ziyakwazi ukuphefumula ubomi kubomi abangabikho. Nangona ucinga ukuba ibhalwe phantsi ngefowuni kwaye ingaba ivela kwikhamera yokhuseleko, awukwazi ukuba unyanisekileyo. Yonke into inokwenzeka kwaye akukho nto engenakwenzeka kwihlabathi leendaba. Kufuneka uhlale unika ingqalelo kuyo isisombululo ilandela emva nje kwesi siganeko esikhulu.
Icala le-Anja Schaap kwakhona liyabonakala lifanele lithathwe kwiindawo eziphakamileyo. Kungekudala, isiqingatha se-Netherlands saqalisa i-smartphone esandleni sabo ukuzingela amanani e-Pokémon kwi-reality reality game for points. Injongo kukuba ukubonakaliswa kwemidlalo yokulandelela abanye abantu kuguqula abantu kumkhosi wamatyala omhle. Uncedo kubo bonke abaselula abasweleyo abafuna ukuphuma kwinkqubo yobunonophelo obuncinci kulutsha okanye luncedo kubo bonke abo bangenayo ingozi. I-Stasi eMpuma Jamani yayingumfana omncinci kwizinto esizibona ezakhiwa eNetherlands. Kwakukho omnye kwi-fifty Inoffizieller Mitarbeiter. Ngokuqinisekiswa kwemidlalo kokukhangela, wonke umntu uza kuba yintsholo ngokukhawuleza.
tags: I-221B Baker Street, idilesi, Anja, app, imifanekiso, eziziimbalasane, Holmes, Katwijk, ukufunyanwa, Iigusha, USherlock, kucelwe
19 Juni 2019 kwi-11: 42
Kulabo abanokwazi ukubona ukudibanisa, khangela nje uDe Mol uzuze udumo. Iingcamango ezimbini (uvavanyo lwezentlalo) zivela kwi-Big Brother kunye ne-Utopia zibonisa apho abantu basebenzela khona .. umphakathi olawulwayo olugcinwe ngamanani, apho ukuphikisana kubanjwe khona kunye neeyure ze-24 zokujonga imeko okanye ingachongiwe ngokuthi 'udidekile' umntu ', wagcina umntu oqokelelweyo phantsi kwefuthe leopiates. Wamkelekile kwiMadurodam yekusasa elizayo
19 Juni 2019 kwi-12: 34
Dear Katwijkers kunye neKatwijkerinnen, zibuze ukuba uhlalutyo olungentla lungalungile. Hamba ubuye ukhangele u-Anja, kodwa qhubeka ubona uhlalutyo olungaphezulu ngaphezu kwakho, ngokunjalo ubone ukuba bonke ababizwa ngokuba ngamalungu entsapho kunye nezo ntombi kunye nommelwane, jonga ukuba ngaphandle.
Okwangoku awuzange ulive kumntu ohleliyo othi uhleli kufuphi no-Anja kwiGrand Cafe de Blauwen Bock (jonga ividiyo Uphando luceliwe). Siye sabona ummelwane wexesha le-A Schaap 1 kwaye sibonile ukuba lo mmelwane usuke eshenxiswe ngefestile ngeendlela zobugcisa.
Abazalwana noodadewabo baseAnja, kufuneka kube nehlanu, sele ubabonile.
Baphi bonke abo kuthiwa ngabahlobo bakaAnja?
I-Katwijkers ngabantu abathembekileyo, kodwa abakwazi ukukhohliswa, ngoko kungekhona ngoku.
Imibuzo emininzi ivulekele ukuba ihlaba iimpendulo. Icala liyancipha inkohlakalo yakho
Kwakhona into engaqhelekanga: Ngezantsi kweLeidsch Dagblad, ukuphendula kweZero ???, ekugqibeleni emva kweeveki ze-3 i-Katwijkers ifumana enye ifoto ye-Anja !!!?
Othandekayo uKamwijkers noKatwijkerinnen bafunda kwakhona kwakhona (kuba mhlawumbi sikhohliswa)
19 Juni 2019 kwi-14: 16
Yintoni uMartin ebhala ngayo. Ngelishwa, abantu abaqhelekileyo abanakukubona okanye bhetele abafuni ukukubona kuba nabo ngokwabo benza isinyanzelo. Akukho nto yinyani. "ubuhlobo" buyinyaniso kwaye buyiyo. Wonke umntu uthatha inxaxheba kumgangatho omncinci, i-Facebook, njl. Enyanisweni, 'asifanele silindele ukuba nantoni na yesiqhelo sabantu. Bahamba kakuhle, banomvuzo omhle / ohambelana ne-IQ yabo ephantsi kunye nemisebenzi elula. Emva koko, abantu bahlala kumntu obolekisiweyo omele usebenze ngokuqinisekileyo kwinqanaba elithile. Ubutyebi bemihlali bunxulumene ngqo nentlupheko kumatyala ehlabathini. Ukurhweba kwabasetyhini, ubundlobongela, ukucoceka kwezingane, ukuthengiswa kweziyobisi, ukutshalwa kwemali, ukwakhiwa kwee-ashore, izivumelwano zerhafu, njl. kakuhle, uMadurodam ungomnye wamazwe aphezulu amakhwenkwe avela kwiskripthi. Ngaba kukho umntu owake wazibuza ukuba kutheni amanye amazwe engabalulekanga ngokunikela ngezivumelwano zerhafu nokunika iingeniso kwiinkampani njl njl. Isizathu kukuba amanye amazwe awavunyelwe ukwenza oko ngabafana abasuka kwiskripthi. Amazwe awazimeleyo kwaye ayalawulwa, axelelwa ngabafana be-script. Abemi bacinga ukuba kuhle kwaye badlala umdlalo. Kukho isivumelwano esilungileyo phakathi kobuhlanga obumanyeneyo, abafana beeskripthi kunye nabantu abaqhelekileyo. Ngethuba nje ukuba bangayi kude kakhulu, abantu abaqhelekileyo baya kulungela. Inani labantu liguquguquka kakhulu 'kwiimfuno' zalo nembono. Abantu abaqhelekileyo abanalo oku ngaphandle kokuba kuthethwa ngu rhu lumente. Yonke inkohlakalo, i-hypocritical eyimfihlo, izigqila ezikhohlakeleyo ezingenayo. Zum kotzen.
19 Juni 2019 kwi-18: 15
i-idd ukunyaniseka, apho umhlambi unemvume phantsi kweemeko ezinzima ukutya ngexesha lokutya, phantsi kwesigqeba esinzima. Ngaphandle kokuba i-intendance pro rataance of the cost is gone beyond the point of decimal that BS [N] ivelisa kwaye inenzuzo. Njengoko ixesha liqhubeka kwaye imveliso iyancipha, i-BS [N] ichanekile kodwa iyancitshiswe ngempumelelo kwaye ixesha lokuphila liyancitshiswa ngokusetyenziswa kwezixhobo ezifumanekayo kumqhubi wekhoboka ukuze iindleko zingabi ngaphezu kwezibonelelo. Siyakwamkela eMadurodam, apho ama-dikes anesisindo, iintambo zeentambo kunye nezigadi zigcinwe ngokukhawuleza. Ekuqalekeni libukeka lizolile kwaye lihlazileyo, kodwa kukho ikhohlisi elingaphantsi.
19 Juni 2019 kwi-18: 44
Lo Mnu. Schaap kwimbono yam ayikho ikhompyutheni efananisiweyo, kodwa nje umdlali we-actress.
Ngendlela, andifuni ukusho ukuba umlinganisi ongenakukwazi ukuba khona, ndicinga nje ukuba kulula ukufumana umdlali we-crazy udibanise ngokwaneleyo ukwenza into enjalo ngenkokhelo evulekile.
Ngandlela-thile imifanekiso ehambelayo yeli gusha ibonakala iyenze kum, kodwa ndiyakwazi ukuphosakela.
19 Juni 2019 kwi-20: 20
Kodwa nangona kunjalo kukhuselekile ukunika ubuso obutsha kumdlali-mdlalo onjalo (jonga imizuzu yokugqibela kwividiyo ye-NVIDIA ukufumana ukuba kulula kangakanani)
19 Juni 2019 kwi-23: 03
Ngethamsanqa, amabutho ase-troll (amabutho emodareyitha) angatshintshwa ngu-AI, kuba awela ngaphantsi kweentsika:
« Ukuba iziprofeto ziyazaliseka, ngaba bubungqina bokuba bakholelwa inyaniso?
U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngeenqwelo zaseJamani? Ngaba oko kunokwenzeka ngokwemithetho yemvelo? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 3.453